Ukusebenzisa i-Amazon S3 yama-Blogs we-WordPress | Martech Zone
Sebenzisa i-Amazon S3 yama-Blogs e-WordPress
NgoMsombuluko, Juni 22, 2009 NgoMsombuluko, Februwari 1, 2016 Douglas Karr
Qaphela: Selokhu sabhala lokhu, selokhu sathuthela ku- ligcina uthi lokuphotha luzungeza nge Ukunikezwa kwenethiwekhi yokuqukethwe inikwa amandla yi-StackPath CDN, i-CDN eshesha kakhulu kune-Amazon.
Ngaphandle kokuthi uku-premium, ipulatifomu yokubamba amabhizinisi, kunzima ukwenza ukusebenza kwebhizinisi nge-CMS efana nayo WordPress. Ukwabiwa kwemithwalo, izipele, ukudilizwa, ukuphindaphinda, nokulethwa kokuqukethwe akuzi kushibhile.
Abamele abaningi be-IT babheka amapulatifomu afana ne-WordPress futhi bawasebenzise ngoba khulula. Mahhala isihlobo, noma kunjalo. Beka i-WordPress kwingqalasizinda ejwayelekile yokubamba futhi abasebenzisi abangamakhulu amabili ngasikhathi sinye bangaletha isiza sakho kokuma okugaya. Ukusiza ekusebenzeni kwebhulogi lami, kuleli sonto ngiguqule ukufakwa kwami ​​kweWordPress Push yonke imidwebo evela ku-Amazon S3 (I-Amazon Simple Storage Service). Lokhu kushiya isiphakeli sami ukumane ngicindezele i-HTML nge-PHP / MySQL.
I-Amazon S3 inikeza isikhombimsebenzisi esibonakalayo sezinsizakalo zewebhu esingasetshenziswa ukugcina nokubuyisa noma yiliphi inani ledatha, nganoma yisiphi isikhathi, kusuka noma ikuphi kuwebhu. Inika noma yimuphi umthuthukisi ukufinyelela kwingqalasizinda yokugcina idatha esabekayo, ethembekile, esheshayo, futhi engabizi kakhulu i-Amazon eyisebenzisayo ukwenza inethiwekhi yayo yomhlaba wonke yamawebhusayithi. Isevisi ihlose ukukhulisa izinzuzo zesikali nokudlulisela lezo zinzuzo konjiniyela.
Ukuguqula isiza se-Amazon S3 kuthathe umsebenzi omncane, kepha nazi izisekelo:
Bhalisela Ama-Web Web Services.
Layisha i-Firefox Add-on ye-S3. Lokhu kukunikeza isikhombimsebenzisi esihle sokuphatha okuqukethwe ku-S3.
Engeza ibhakede, kulokhu ngingezile www.martech.zone.
Faka i-CNAME kumbhalisi wakho wesizinda ukukhomba isizinda esivela kusayithi lakho siye ku-Amazon S3 ngokusingathwa okubonakalayo.
Landa bese ufaka i-plugin ye-WordPress ye-Amazon S3.
Setha i-ID yakho ye-AWS Key Key ne-Secret Key bese uqhafaza isibuyekezo
Khetha isizinda / ibhakede olakhe ngenhla le- Sebenzisa leli bhakede ukusetha.
Izinyathelo ezilandelayo bekuyingxenye emnandi! Bengingafuni ukuhambisa nje okuqukethwe okuzayo kusuka ku-S3, bengifuna ukuhambisa konke okuqukethwe, kufaka phakathi izikhangiso, izingqikithi namafayela emidiya edlule.
Ngidale amafolda we- Izikhangiso, themes, Futhi ukulayisha ebhakedeni lami ku-S3.
Ngisekele konke okuqukethwe kwami ​​kwamanje (isithombe namafayela wemidiya) kumafolda asebenzayo.
Ngiguqule ifayela lami le-CSS kutimu yami ukudonsa zonke izithombe kusuka www.martech.zone/themes.
Ngenze i- Ukusesha kwe-MySQL bese kufaka okunye esikhundleni futhi ngivuselele konke ukubhekiswa kokuqukethwe kwemidiya okuzokhonjiswa kusizinda esingaphansi se-S3.
Ngivuselele zonke izinkomba zezithombe zezikhangiso ezizokhonjiswa kufolda yezikhangiso kusizinda esingaphansi se-S3.
Ukusuka lapha kuqhubeke, ngimane ngidinga ukulayisha imidiya ku-S3 kunokusebenzisa inkhulumomphendvulwano yokulayisha isithombe ezenzakalelayo ye-WordPress. I-plugin yenza umsebenzi omuhle ngokubeka isithonjana se-S3 endaweni efanayo yokulayisha / ukufaka izithonjana kumlawuli we-WordPress.
Ukuhambisa yonke idatha nokusebenzisa i-S3 izinsuku ezimbalwa manje kuholele ku- $ 0.12 kumacala we-S3, ngakho-ke angikhathazeki ngemali ekhokhwayo ethintekayo - mhlawumbe kuzobiza amadola ambalwa ngenyanga. Ngasohlangothini oluhle, uma ngithola ithani lezivakashi, kufanele ngikwazi ukuphatha okuningi okuningi kunezibambo zamapulatifomu zamanje. Isiza sami silayisha ikhasi lasekhaya cishe 40% wesikhathi ebesikade sisebenza ngaso, ngakho ngijabule kakhulu ngokuhamba!
Into emnandi kakhulu ngalokhu kuhamba ukuthi empeleni ibingadingi kuthuthukiswa!
Tags: Amazonamazon s3ibhulogiinethiwekhi yokulethwa kokuqukethweflywheelmaxcdnwpengine
Mina, Mina, Mina kanye Nezokuxhumana
Yini ukuThuthukiswa kwakho kwe-Organic?
Jun 23, 2009 ku-2: 55 PM
Ngine-akhawunti ye-Amazon S3, kepha ngemuva kokuzama ukuthola izinto, ngivele ngakushiya ngoba kunzima kakhulu. Ingabe i-firefox addin ye-S3 ikwenza kube lula kakhulu?
Jun 23, 2009 ku-12: 30 PM
Isengezo seFirefox sasiyisiqephu esiyinhloko sephazili. Udinga ukuba nebhakede endaweni yakho ngaphambi kokusebenza kwe-plugin - ngakho-ke lokho kuyenza ibe yisifinyezo.
Jun 23, 2009 ku-3: 03 PM
Kufanele ngengeze, uzodinga ukukhomba i-CNAME yakho kokusha your_unique_cloudfront_distribution_name.cloudfront.net esikhundleni se your_unique_subdomain.s3.amazonaws.com. Kepha ngemuva kwalokho, uyiphatha njengebhakede elijwayelekile le-S3.
Kubiza kakhulu uma usebenzisa inketho ephezulu yejubane / ephansi ye-CloudFront. Uma uthatha isinqumo sokuthi ukhethe ukubuyela enguqulweni ejwayelekile ye-S3, vele ushintshe i-CNAME yakho ukuze ukhombe emuva ku-s3.amazonaws.com esikhundleni salokho.
Cishe unyaka odlule, ngabhalahttp://www.carltonbale.com/tag/amazon-s3/"a okuthunyelwe okumbalwa kwebhulogi ku-Amaon S3 kunoma ngubani onentshisekelo.
UJun 23, 2009 ngo-10: 31 AM
Uma ufuna ukwanda okwengeziwe kwejubane, vula i-Amazon S3 yakho yebhakede libe yibhakede le-Amazon CloudFront, elenza iseva yamazwe amaningi yangempela, i-latency low Distribution Distribution Network. Nasi isixhumanisi esinayo yonke imininingwane: http://aws.amazon.com/cloudfront/faqs/
Futhi, i-plugin ye-wp-supercache inganikeza ukwanda okukhulu kwejubane kumasayithi anomgwaqo omkhulu njengoba inciphisa kakhulu umthwalo we-CPU nezingcingo ezigciniwe.
UJun 23, 2009 ngo-11: 35 AM
Kuhle kakhulu, Carlton! Ngakho-ke kunethiwekhi esatshalaliswa kakhulu njenge Akamai. Bengingazi ukuthi banakho lokho okutholakalayo! Ngingahle ngisebenzise ithuba ngemuva kokubona ezinye izindleko.
Bengilondolozwe okwesikhashana nge-wp enikwe amandla ngaphambilini, kepha nginokuqukethwe okuthile okunamandla ngakho bengizabalaza ngakho ngoba kwesinye isikhathi bekungalondoloza okuqukethwe ebengifuna ukukulayisha ngesikhathi sangempela.
UJun 23, 2009 ngo-11: 45 AM
Ngokuchazwa kwabo kuzwakala sengathi i-Amazon yenza okuthile okuhluke ngokuphelele, bathi:
“I-Amazon CloudFront isebenzisa izindawo eziyi-14 ezinqenqemeni ezimakethe ezinkulu emhlabeni jikelele. Abayisishiyagalombili base-United States (Ashburn, VA; Dallas / Fort Worth, TX; Los Angeles, CA; Miami, FL; Newark, NJ; Palo Alto, CA; Seattle, WA; St. Louis, MO). Abane baseYurophu (e-Amsterdam; eDublin; eFrankfurt; eLondon). Amabili ase-Asia (eHong Kong, eTokyo). ”
Ngokusebenzisa kwabo ukuhwebelana nge-inthanethi ukuze basebenzise ukusondela kwabo kumsebenzisi wokugcina lapho ama-CDN afana ne-Akamai enamaseva asondele kakhulu kumsebenzisi wokugcina ngokuvamile ngaphakathi kwenethiwekhi ye-ISP.
Indlela yama-Amazons yokukwenza ishibhile kakhulu futhi isebenza kahle nge-Akamai.
UJun 23, 2009 ngo-11: 36 AM
Ngeke ngithi kunzima “ukwenza ukusebenza kwamabhizinisi nge-CMS efana ne-WordPress.”
Konke kule ndlela oyisetha ngayo ingqalasizinda yakho noma indlela oyisingatha ngayo i-CMS yakho.
Indlela i-CMS uqobo ebhalwe ngayo nayo ingadlala indima enkulu ekusebenzeni kwayo njengoba uCarlton akhombisile ngokusebenzisa i-plugin ye-wp-supercache.
Bekungaba ngcono ukube ukusebenza kwe-wp-supercache plugin kwakwakhelwe ku-wordpress kusukela ekuqaleni - kepha lokho kungadinga ukubhala kabusha ingaphambili. Okuyikho ilightpress.org wenza.
Ukulayisha kokuqukethwe kwe-static kokunye okufana ne-S3 kuyindlela enhle yokwehlisa ukucubungula nokulethwa kusuka kuseva enkulu. Kuyindlela elula futhi elula yokungena kwingqalasizinda yama-Amazons ukwenza ukuphakamisa okunzima kepha uma usufinyelele umkhawulo we-cretin, i-Amazon izoqala ukubiza futhi kushibhile ukukwenza endlini nokuhamba ne-CDN.
Bengilokhu ngicabanga ngaleso simo kancane, uma nje abantu abayi-100 bebahlangana futhi banikele inyanga ngayinye inani lentengo yeseva ehloniphekile abebezoyikhokhela ngokujwayelekile bangakha / bahlanganise ingqalasizinda yokubamba engabamba cishe noma yini.
Jun 23, 2009 ku-1: 25 PM
$ 0.12 ngezinsuku ezimbalwa zokuqala zezinsizakalo ze-S3. Ungasibuyekeza isihloko ezinyangeni ezimbalwa bese ukhombisa izibalo ezithile zethrafikhi uma uqhathanisa nezindleko? Kungaba okuthokozisayo ukubona ukuthi izindleko zehla kanjani kuzivakashi ezihlukile nangokuphikisana nezindleko zesikhangiso noma okunye ukufaka.
Jun 23, 2009 ku-1: 31 PM
Impela! Sizokwabelana ngemininingwane yanyanga zonke neyonyaka ngokushesha lapho izikweletu ziqala ukungena!
Dec 22, 2011 ngo-12: 36 PM
Sekuyiminyaka embalwa manje… noma yiziphi izibuyekezo?
Dec 22, 2011 ngo-12: 40 PM
Yebo - uwubonile umusho wami wokuvula? Insizakalo ye-S3 yakwa-Amazon yayihamba kancane ngakho-ke sathuthela eMaxCDN njengeCDN yethu futhi siyayithanda!
Dec 22, 2011 ngo-1: 32 PM
Ngiyaxolisa; lokho nje akuzange kungicwile. Ngiyabonga.
Jul 22, 2009 ku-9: 14 AM
Uma uku-Windows ungasebenzisa i-S3 Browser - http://s3browser.com ukulayisha amafayela, njengezithombe, imibhalo, njll ku-Amazon S3. Kumele ube nethuluzi.
Futhi ngiyabonga ngokuthunyelwe okuwusizo!
Aug 21, 2009 ku-2: 31 AM
I-Amazon S3 iyisevisi enenani elimangazayo. Ngikunqubo yokuyihlanganisa ne-CMS. Ukuphela kwendaba engihlangane nayo ngombono wokuthuthuka, hhayi umbono wensizakalo ye-Amazon, ukuthi uma ufuna umsebenzisi wakho alayishe ngokusobala ifayili ngqo ku-S3 nge-POST futhi unefomu lokuphindaphinda elihlanganisa umbhalo owenzelwe indawo yangakini database, ubhajwe. Ungadinga ukulihlukanisa libe yizinhlobo ezimbili, noma zama ukusebenzisa i-ajax ukulayisha ifayela kuqala bese empumelelweni uthumele imininingwane endaweni yangakini.
Uma noma ngubani enesisombululo esingcono, zizwe ukhululekile ukungazisa: o)
Noma kunjalo, ukonga izindleko zokusingathwa kwamafayela amakhulu omgwaqo kuqinisekisa ukwakhiwa kohlelo olunjalo.
Izinhlelo Zokulawulwa Kohlu Lokucindezela
I-Oct 26, i-2010 ku-10: i-15 PM
Kuhle ukubhala. Ngidlulile njengoba uchaza, kepha kuphaneli yami yomlawuli lapho ngifaka khona izithombe, angiboni inkinobho ye-S3. Ngibonile ukuthi izithombe zami, uma zilayishwa ngokujwayelekile ziphelela e-Amazon, ngabe lokhu kusho ukuthi sengingakwazi ukukopisha zonke izithombe zami ezikhona futhi ngisuse lezo ezikuseva?
Futhi ngidinga ukuguqula lapho izithombe zami zivela khona noma ingabe i-plugin iyakwenza lokhu?
I-Oct 26, i-2010 ku-11: i-29 PM
Kufanele ubone isithonjana esincane esibukeka semininingwane engakwesokudla kwesithonjana sakho esijwayelekile. Lesi yisithonjana sokuvula iwindi le-Amazon. Ngihambise konke okuqukethwe kwe-wp / okulayishiwe ku-Amazon futhi ngenza isiqiniseko sokuthi nginendlela efanayo… umehluko kuphela wokuba isizinda esingezansi. Bebekhona http://www... futhi manje sebeku-free.marketingtechblog.com. Ngemuva kokukopisha zonke izithombe ngiye e-Amazon, ngisebenzise i-PHPMyAdmin futhi ngacinga ngangena esikhundleni src = ”http://martech.zone ngafaka i-src =” images.marketingtechblog.com. (https://martech.zone/wordpress/mysql-search-replace/)
Ngiyethemba lokho kuyasiza! Akunamthungo, kepha kuyasebenza.
Okthoba 31, 2010 ngo-2: 03 AM
Sawubona Douglas, ngiyabonga ngalokho, ngivuselele i-DB ngakho-ke zonke izithombe zikhomba ezithombeni., Kepha ngibona ezinye izithupha (lapho zibhekwa ngemininingwane yekhasi) zikhombisa iamge ku-www.
Nayi isayithi (www.gamefreaks.co.nz) - a, alos enenkinga enkulu yememori ekhasini lokuqala, eqale kuphela lapho sesigudluze ukusingathwa, yingakho manje ngibheka ukulayishwa kwengcindezi yokubamba i-S3. 😎
Nov 3, 2010 ngo-4: 57 PM
uyazi ukuthi kungenzeka yini ukuthi ulayishe ku-S3 ngaphandle kokuthi futhi ugcine ikhophi kuseva yendawo?
Nov 3, 2010 ngo-6: 08 PM
Sawubona Scott, i-plugin ye-S3 inikeza indlela yayo ngqo eya e-Amazon, ngakho-ke ifayela ALIGCINIWE endaweni yangakini.
Feb 16, 2011 ngo-5: 37 AM
Ingabe le plugin ye-wordpress "leyo okhulume ngayo"
Sebenza ngenguqulo yakamuva ye-wordpress?
Ngingaba nentshisekelo yokwazi ukuthi iyahambisana yini, ngoba angicabangi ukuthi ibuyekeziwe isikhashana. Lwazise usizo
Feb 16, 2011 ngo-9: 02 PM
Iyahambisana nenguqulo yakamuva, kepha ngokweqiniso angiyithandi indlela esebenza ngayo - kuzofanela uhambise futhi ulayishe zonke izithombe ku-S3 ngenqubo ehlukile. Empeleni singakha ukuhlangana okuqinile kwe-CDN (Content Delivery Network) ne-WP okuvumelanisa kunokufuna inqubo ehlukile.
Feb 16, 2011 ngo-9: 13 PM
Okuthunyelwe okuhle! Ngimusha kulokhu, futhi bengingazi ukuthi ungathumela imidiya. Kunengqondo nokho. Siyabonga ngokwabelana!
Mar 16, 2011 ku-5: 29 PM
Uyazi ukuthi ngabe lokhu kusebenza “namabhakede angaphandle” futhi? Ngifuna ukusetha lokhu kube yibhulogi yomngane wami futhi ngimvumele asebenzise ibhakede ku-akhawunti yami ye-AWS (sengivele ngamenzela i-akhawunti yomsebenzisi futhi ngamnika ukufinyelela kwelinye lamabhakede ami ngisebenzisa amathuluzi we-Amazon IAM).
Ngo-Apr 10, i-2011 ku-9: i-16 PM
I-athikili enhle! Siyabonga ngokuthumela. Ungisizile ngathola ukusethwa nokusebenza.
Mar 1, 2012 ku-3: 57 PM
Angikwazi ukuthola ukhiye oyimfihlo we-Amazon ungangisiza
Mar 15, 2012 ku-8: 29 AM
Celia, iya ekhaya le-AWS http://aws.amazon.com/ nangaphansi kokudonsela phansi kwe- "Akhawunti Yami / Ikhonsoli", khetha "Ukuqinisekisa kokuphepha." Ngena ngemvume uma udinga. Ukusuka lapho, skrolela ezansi ku-Access Credentials futhi uzobona ama-ID wakho we-Access Key efakwe kuhlu. Kopisha eyodwa yaleyo ye-ID eyisihluthulelo yale-plugin, bese uchofoza kusixhumanisi esithi “Khombisa” ukuze ubone ukhiye wokuFinyelela Imfihlo omude. Kopisha lokho bese ukunamathisela kuzilungiselelo ze-plugin futhi. Kufanele usethwe ngemuva kwalokho!
Mar 1, 2012 ku-3: 58 PM
Ungangitshela ukuthi ngiwuthola kanjani ukhiye oyimfihlo we-Amazon we-plugin elayishwe kabusha ngicela
Mar 26, 2012 ku-2: 19 AM
Siyabonga ngezinyathelo nolwazi! Kuzwakala njengesixazululo esihle sokugcina. Kubiza malini ngenyanga ngokwesilinganiso? Ngiyabonga!